Cabdullahi Yuusuf iyo Geeddi oo la filayo in ay maanta kala baxaan, ciidamada Puntland ee ku sugnaa degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho oo loo sheegay in ay madatooyada ku laabtaan iyo ciidamo taageersan Cali Geedi oo soo buuxiyay goobiyii ay ka tageen iyo 3 ruux oo ku geeriyootay xalay xero ay degen yihiin ciidamda Itoobiya. Ruunkinet 11/10/07
Warar lagu kasloon yahay oo aan dhawaan ka helnay magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya in maanta golaha baarlamaanka ay ka doodi doonaan in la kale eryo xukuumadda Prof. Geeddi.
Arrintan oo la filayay in madaxweyne Yuusuf keeno Sabtiga soo socda golaha baarlamaanka ayaa warkan sheegayaa in uu ra'isul wasaare Geeddi wato in la dedejiyo arrintan ayadoo la sheegaya in lacag badan loo qeybiyay xubnaha baarlamaanka si ay ugu codeeyaan in aan dowladda la kala dirin.
Prof. Geeddi oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ayaa waxaa uu la kulmay inta badan xildhinaanada ku sugan magaalada Baydho.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Col. Cabdullahi Yuusuf dad ku dhow dhow u sheegay inuu is casili doono haddii uu ku guul dareysto in uu dowladda Cali Geeddi rido.
Dhanka kale, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in saldhigyo ay joogeen ciidamada laga keenay Puntland ay maanta ka bexeen.
Ciidamadan laga keenay Puntland ee ku sugnaa degmada Cabdicasiis ayaa la sheegay in ay ku laabteen madaxtooyada Villa Soomaaliya ayadoo goobihii ay ka tageen ay soo buuxiyeen ciidamo taageersan ra'isul wasaare Geeddi.
Ciidamada Puntland iyo kuwa ra'isul wasaare Geeddi ayaa mudgi soo kala dhex galay kadib markii uu xumaaday cilaaqaadka labada mas'uul.
Sidoo kale, qarax ka dhacay magaalada Baydhabo xalay ayaa la sheegay in ay ku dhinteen 3 ruux.
Saddexdan ruux oo aan la sheegin cidda ay yihiin ayaa loo maleynayaa in ay ka mid yihiin ilaalada xeradaasi.
Xeradaasi ayaa waxaa ku sugnaa ciidamda Itoobiya ayadoo qaraxan oo sababay gaari la saaray waxyaabaha qarxa.
Weli lama oga tirada ciidamada Itoobiya ee ku geeriyootay qaraxaasi.